Baaxadda khasaarihii qaraxii shalay oo la sugay; cambaaraynta beesha caalamka oo sii kordhaysa. – Radio Daljir
Baaxadda khasaarihii qaraxii shalay oo la sugay; cambaaraynta beesha caalamka oo sii kordhaysa.
Muqdisho, Oct 05 ? Waxaa si aad ah u kordhay baaxadda khasaarihii ka dhashay qaraxii is-miidaaminta ahaa ee shalay lala bar-tilmaameedsay wasaaradaha dawladda federaalka oo dad shacab ah oo arday u badani ku sugnaayeen xilligaas.
Baaritaan iyo xog-aruurin la xiriirta tira-koobka dhimasho ee weerarkaasi sababay ayaa tilmaamay 76 ruux in ay ku dhinteen qaraxaasi kuwaasi oo iskugu jira dad goobta ku naf-baxay iyo kuwa dhaawacyo soo gaaray u dhintay, waxaana sidoo kale tirada dhaawacu ay iyana gaartay 123 ruux sidaasna waxaa Radio Daljir ii ka xaqiijiyey hay?addo ka tirsan dawladda iyo goobaha caafimaadka.
M/weynaha dawladda federaalka Shariif Sh. Axmed, ayaa maanta booqday boobtii shalay qaraxaasi lala bar-tilmaameedsaday ee xaruntii hore ee Hargaha iyo Saamaha, waxaana sidoo kale uu m/weynuhu tahay qaar ka mid ah isbitaallada Muqdisho oo ay daadsan yihiin dadkii shalay ku dhaawacmay weerarkaasi.
Dhinaca kale tan iyo intii uu dhacay weerarkaasi is-miidaaminta ah oo ay sheegteen ururka Al-shabaab waxaa si aad ah u sii kordhayey dhaleecaynta iyo cambaaraynta kulul ee loo soo jeedinayo ciddii falkaasi gaystay.
Dawlada Maraykanka oo ka mid ah waddamada dhaleeceeyey falkaasi weerar, ayaa si kulul u cambaarasay qaraxaasi is-miidaaminta ahaa ee dhiigga badan ku daatay kaasoo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Qoraal laga sooo saaray wasaarada arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa lagu sheegay in Maraykanku uu cambaaraynayo weerarkaasi, islamarkaasina uu aad uga xunyahay dhacdaasi qallafsan.
Dawladda Maraykanka ayaa sheegty in ay dhibaatada la qaybsanayo qoysaska asxaabtii ay jeclaayeen ku dhinteen weerarkii Muqdisho, waxaana uu ballanqaaday in uu gacansiinayo dawladda Soomaalia iyo hawlgalka nabad ilaalinta midowga africa ee AMISOM si meesha looga saaro kooxda Al-shabaab.
Jimciyadda qaaruumaha ka dhaxay ayaa isna weerarkii is-miidaaminta ahaa ee shalay ku tilmaantay wax laga xumaado oo aad u fool, dhanna ka ah bani’aadnimada.
Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Somalia Dr. Augustine Philip Mahiga ayaa si weyn u cambaareeyey weerarkii is-miidaaminta ahaa ee baabuurka loo adeegsaday ee lagu qaaday xaruntii Hargaha iyo Saamaha.
“Waxaan ka murugaysanahay weerarkan macnadarada iyo fuleynimada ah, waxaana tacsi u dirayaa qoysaska dhibanayaasha ah ee umbadkooda iyo ehelkoodu ku naf-waayeen halkaas, ficillada noocan oo kale ah waa kuwo aan la aqbalikarin, dilka dadka Somalida caadiga ah ma noqonayo wax qiil loo samaynkaro” ayuu yiri Mr Mahiga.
Waxaana uu raaciyey ” inkastoo xajirayaashii ay ka bexeen Muqdisho, haddana waa adagtahay in laga hortago weerarada argagaxiso ee noocan oo kale ah ee aanu si joogto ah uga digaynay in ay suuuragaltahay in ay sii kordhaan”
Dr. Mahiga, ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarada ay Al-shabaab ku qaadeen magaalooyinka Dhuusa- mareeb ee gobolka Gal-gaduud ee bartamaha Somalia iyo magaalada Dhoobley ee ee goblka Jubbada hoose.
Mr. Mahiga ayaa tilmamaay in ay muhiimad leedahay in la xoojiyo cududda ciidanka qaranka Soomaliyeed, waxaana uu sidoo kale beesha caalamka ugu baaqay in ay kordhiyaan taageerada ciidamada AMISOM.
Dawladd federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa si kulul u dhaleecaysay iyna falkaasi weerar ee shalay lagu qaaday xarumo wasaaradaheedu degganaayeen, inkastoo baaxadda khasaare ay haleeshay shacab masaakiin ah oo hawlo uga xirnaayeen xarumaha kala duwan ee dawladda.
Madaxweynaha dawladda federalka ku meel-gaarka ah ee Somalia Sheikh Shariif Sheikh Axmed,ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid bahalnimo ah oo ay ka dambeeyeen cadawga Somalia ee Al-Shabaab iyo Al-qaacida, waxaana Shariif ugu baaqay Shacabka Somaliyeed in ay u midoobaan waajihida Al-qaacida iyo Al-shabaab.
M/weyne Shariif, waxaa uu cambaaraytiisa kaddib uu tacsi u diray ehelkii iyo qaraabadii ay ka tageen dadkii shalay ku naf-waayey qaraxaasi.
Sidoo kale madaxweynaha dawlada Puntland ee Somalia ayaa isaguna si adag u canbaareeyey weerarkaasi shalay waxaana madaxweyne C/raxmaan Maxamed Maxamuud ( Farole) ku tilmaamay weerarkaasi mid waxashnimo ah oo argagaxisanimo .
Madaxweyne C/raxmaan Maxamed Maxamuud, ayaa tacsi u diray dhibanayaasha asxaabtoodii lagu dilay weerarkaasi, dawlada federalka ah ee Somalia iyo guud ahaan shacabka Somaliyeed.
Madaxweyne C/raxmaan Maxamed Maxamuud ( Farole) ayaa ugu baaqay shacabnka Somaliyeed in ay u midoobaan sidii meesha looga saarilahaa Kooxaha uu ku tilmaamay argagaxiso, waxaana uu sidoo kale dalbaday taageero caalami ah si loo jebiyo qolyaha mintidka ah.
Sidoo kale weerarkaasi shalay lagu laayey dadka aadka u badan, waxaa sidaasi si la mid ah cambaarayn midda ugu culus dul-dhigay dawladdo iyo shaqsiyaad magac iyo maamuus weyn ku dhex leh adduunka.